Billard – “Blackball Time Limit Challenge”: lasan’i Ramesy ny lelavola 2 500 000 Ar | NewsMada
Tontosa ny asabotsy 27 sy ny alahady 28 novambra lasa teo, tao amin’ny In Square Ambatobe, ny “Tournoi Blackball Time Limit Challenge”, taranja billard, nokarakarain’ny klioba In Square Billard Club (ISBC).
Nandrombaka ny laharana voalohany, ka nibata ny amboara sy fanomezana ary ny lelavola 2 500 000 Ar i Ramesy. Faharoa i Tax mpilalaon’ny ATMO, nahazo amboara sy fanomezana 1 000 000 Ar ary fahatelo i Daniela avy amin’ny ISBC, nomena ny medaly sy fanomezana 250 000 Ar.
Raha tsiahivina, niisa 32 ireo mpandray anjara, avy amin’ny klioba Klassic Billard Club (KGB), ny Atmosphère Billard Club (ATMO), ny Legend’s Legacy Club (LLC), ny Alpha Billard Club (ABC), ny Stone Billard Club (SBC), ny club Luiggy, ny club One More, sy ireo mpilalao nandeha tamin’ny anarany manokana ary ny ISBC, mpikarakara.
Nozaraina tao anaty sokajy valo ireo mpifaninana rehetra, ka niatrika ny ampahavalon-dalana ireo roa voalohany isam-bondrona. Nahazo isa 1 ny mpandresy ary 0 kosa ny resy.
32 isa no mpandray anjara ka nozaraina ho poule 8 izy ireo izany hoe mpandray anjara 4 no anaty poule iray.
Fahombiazana tanteraka ny fifaninanana, noho ny fiaraha-miasa teo amin’ny klioba ISBC sy ireo mpanohana dia ny In Square, mampiantrano, ny DHL orinasa misahana ny fitaterana entana ilaina rehetra, ny Hertie Boutique, amin’ny loka rehetra, ny Kolo TV ary ny Mavericks, efa mpiara-miombon’antoka amin’ny In Square Billard Club hatrany.